Ọ “Ga-agụsi Gị Ike”
GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikongo Kimbundu Kongo Korean Lingala Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Maya Mizo Moore Myanmar Ndebele Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tetun Dili Thai Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese
Ọ NA-EWUTE EWUTE ịhụ ebe onye ị hụrụ n’anya tagidere ahụhụ nwụọ. Ụdị ọnwụ ahụ na-ewute anyị nke ukwuu. Ma, ọ bụ ihe na-akasi obi ịmara na Onye Okike anyị, bụ́ Jehova Chineke, na-aghọta uju anyị na-eru. Nke ka nke bụ na ọ na-agụ ya agụụ iji ikike ya na-enweghị atụ kpọlite ndị nwụrụ anwụ. Legodị otú okwu Job, nke dị na Job 14:13-15, si mee ka anyị nwee olileanya.
Tụlegodị mgbe o kwuru ya. Job, bụ́ nwoke nwere okwukwe pụrụ iche, dabara ná nnukwu ọnwụnwa—nke gụnyere ihe onwunwe ya ifunahụ ya, ụmụ ya niile ọ hụrụ n’anya ịnwụnahụ ya, na ịda ajọ ọrịa. Mgbe ahụ ọ nọ n’ahụhụ, ọ rịọrọ Chineke, sị: “A sị nnọọ na ị ga-ezobe m na Shiol [ili nke ihe niile bụ́ mmadụ]!” (Amaokwu 13) Job lere Shiol anya ka ihe ga-akwụsị ahụhụ ya. N’ebe ahụ, bụ́ ebe ọ ga-adị ka akụ̀ Chineke zoro ezo, ihe isi ike ya na ihe mgbu ya ga-akwụsị. *
Shiol ọ̀ ga-aghọ ụlọ Job ruo mgbe ebighị ebi? Ọ bụghị ihe Job kweere. Ọ gara n’ihu n’ekpere ya, sị: “A sị nnọọ . . . na ị ga-ekpebi oge m ga-anọru, i wee cheta m!” Obi siri Job ike na ọnụnọ ya na Shiol ga-abụ nwa oge nakwa na Jehova agaghị echefu ya. Job ji oge ọ ga-anọ na Shiol tụnyere oge a manyere ya ichere. Ruo ole mgbe? O kwuru, sị: “Ruo mgbe a ga-eme ka m nwere onwe m.” (Amaokwu 14) Nnwere onwe ahụ pụtara ịkpọpụta ya na Shiol, ya bụ, ịkpọlite ya n’ọnwụ!
Olee ihe mere obi ji sie Job ike na ya ga-enwere onwe ya? Ọ bụ n’ihi na ọ maara otú obi dị Onye Okike anyị hụrụ anyị n’anya banyere ndị nwụrụ anwụ ji ikwesị ntụkwasị obi fee ya. Job kwuru, sị: “Ị ga-akpọ òkù, mụ onwe m ga-azakwa gị. N’ihi na agụụ ọrụ aka gị ga-agụsi gị ike.” (Amaokwu 15) Job kwetara na ya bụ ọrụ aka Chineke. Onye Na-enye Ndụ, bụ́ onye kpụrụ Job n’afọ nne ya, nwere nnọọ ike ime ka ọ dịghachi ndụ mgbe ọ nwụchara.—Job 10:8, 9; 31:15.
Okwu Job na-akụziri anyị banyere ọmịiko Jehova: Ọ hụrụ ndị tụkwasịrị ya obi, dị ka Job, bụ́ ndị na-ekwe ka ọ kpụzie ha ịghọ ndị dị mma n’anya ya n’anya. (Aịzaya 64:8) Jehova ji ndị ji ikwesị ntụkwasị obi efe ya kpọrọ ihe. Agụụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi nwụrụ anwụ ‘na-agụsi ya ike.’ Otu onye ọkà mmụta kwuru na okwu Hibru e si na ya sụgharịa okwu ahụ bụ “otu n’ime okwu ndị kasị sie ike na-egosi na ihe gụrụ mmadụ agụụ.” Ọ bụghị naanị na Jehova na-echeta ndị na-efe ya ofufe kama ọ na-agụsikwa ya agụụ ike ịkpọlite ha n’ọnwụ.
Obi dị anyị ụtọ na Jehova ji akwụkwọ Job, bụ́ otu n’ime akwụkwọ Baịbụl ndị mbụ e dere, mee ka anyị mata nzube ya ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ. * Ọ chọrọ ka ị hụ ndị ị hụrụ n’anya nwụrụ anwụ ọzọ. Icheta nke ahụ nwere ike ime ka uju ị na-eru belata. Ọ́ gaghị adị mma ka ị mụtakwuo banyere Chineke a hụrụ anyị n’anya na otú i nwere ike isi kwe ka ọ kpụzie gị ịghọ ụdị onye ga-ahụ mgbe ọ ga-emezu nzube Ya?
Ebe anyị na-atụ aro ka ị gụọ na Baịbụl na Mach:
▪ Esta 1–Job 15
^ par. 4 Otu akwụkwọ e ji eme nchọnchọ kwuru na okwu Job, bụ́, ‘zobe m,’ nwere ike ịpụta “idobe [m] n’ebe ọ na-adịghị ihe ga-eme m dị ka akụ̀ dị oké ọnụ ahịa e chekwara echekwa.” Akwụkwọ ọzọ kwuru na okwu ndị ahụ pụtara “zobe m dị ka akụ̀ dị oké ọnụ ahịa.”
^ par. 8 Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere nkwa Chineke kwere na Baịbụl ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ ịdị ndụ n’ụwa ọhụrụ nke ezi omume ya, gụọ isi nke 7 nke akwụkwọ bụ́ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? nke Ndịàmà Jehova bipụtara.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ọ “Ga-agụsi Gị Ike”